FDA ankasitrahany Vosevi for hepatita C - China Unibest Industrial
Urinary System Zava-mahadomelina
Vitaminina D Series Kamban-teny
R & D Tontolo_iainana
Process Research sy ny Developme
FDA ankasitrahany Vosevi for hepatita C
Ny US Sakafo sy ny Fanafody Administration ankehitriny neken'ny Vosevi mba hitondra ny olon-dehibe amin'ny mitaiza ny hepatita C virosy (VHC) genotypes tsy misy simba anefa 1-6 (aretina aty), na amin'ny pahalemem simba anefa. Vosevi dia raikitra-levitra, mitambatra takelaka indroa teo aloha nankatoavina zava-mahadomelina - sofosbuvir sy velpatasvir - ary vaovao fanafody, voxilaprevir. Vosevi no voalohany nekena fitsaboana ho an'ny marary, izay efa teo aloha nampijalina niaraka tamin'ny mivantana-manao antiviral sofosbuvir zava-mahadomelina na zava-mahadomelina hafa ho VHC izay manakana ny proteinina atao hoe NS5A.
"Direct-miasa antiviral zava-mahadomelina manakana ny otrik'aretina tsy nihamaro ary matetika hahasitrana VHC. Vosevi dia manome ny fitsaboana marary safidy ho an'ny sasany izay tsy voatsabo soa aman-tsara amin'ny zava-mahadomelina hafa VHC tamin'ny lasa, "hoy Edward Cox, MD, talen'ny ny Biraon'ny antibiotika Products ao amin'ny Center for FDA ny Zava-mahadomelina sy ny Research Evaluation.
Hepatita C dia niparitaka be aretina izay mahatonga mamaivay ny aty izay mety hitarika ho malain aty ny asa na ny aty tsy fahombiazana. Araka ny Foibe Miady Amin'ny Aretina, Tombanana ho 2.7 ny 3.9 tapitrisa ao amin'ny United States no mitaiza VHC. Marary sasany izay mijaly noho ny aretina mitaiza VHC nandritra ny taona maro mety ho jaundice (mavo maso na hoditra), ary hanana fahasarotana, toy ny mandeha ra, ranon fanangonan-karena ao an-kibony, ny aretina, sy ny fahafatesana kanseran'ny aty.
Misy enina, fara fahakeliny, miavaka tsara VHC genotypes, na sorisory ao, izay fototarazo vondrona miavaka ny otrik'aretina. Ny fahafantarana ny aretina ny otrik'aretina dia afaka manampy mampahafantatra fitsaboana tolo-kevitra. Eo ho eo amin'ny 75 isan-jaton'ny Amerikanina amin'ny VHC manana genotype 1; 20-25 isan-jato no genotypes 2 na 3; ary ny malemy ny marary maro no mitondra ny tsimokaretina genotypes 4, 5 na 6.
Ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny Vosevi dia fizahana roa Dingana 3 pitsaboana fitsapana izay nisoratra anarana 750 eo ho eo ny olon-dehibe tsy misy simba anefa, na amin'ny pahalemem simba anefa.
Ny fitsarana voalohany nampitaha 12 herinandro ny fitsaboana amin'ny placebo Vosevi amin'ny olon-dehibe amin'ny genotype 1 izay efa tsy nahomby aloha fitsaboana miaraka amin'ny NS5A inhibitor zava-mahadomelina. Marary amin'ny genotypes 2, 3, 4, 5 na 6 nandray Vosevi rehetra.
Ny fitsarana faharoa nampitaha 12 herinandro Vosevi ny teo aloha nankatoavina zava-mahadomelina sy ny velpatasvir sofosbuvir amin'ny olon-dehibe amin'ny genotypes 1, 2 na 3 izay efa tsy nahomby aloha fitsaboana amin'ny sofosbuvir fa tsy ho NS5A inhibitor zava-mahadomelina.
Results ny fitsapana roa Hita fa ny 96-97 isan-jaton'ny marary izay nandray Vosevi tsy nanana otrik'aretina hita ao amin'ny ra 12 herinandro, rehefa vita fitsaboana, milaza fa ny marary 'aretina efa sitrana.
Fitsaboana soso-kevitra ho an'ny tsy mitovy Vosevi miankina amin'ny genotype niparitaka be sy fitsaboana mialoha tantara.
Ny tena mahazatra voka fanehoan-kevitra ao amin'ny marary nitondra Vosevi dia aretin'andoha, harerahana, sy ny aretim-pivalanana maloiloy.
Vosevi dia contraindicated amin'ny marary mandray ny zava-mahadomelina rifampin.
Hepatita B otrik'aretina (ny hepatita B) nandrafitra efa voalazan'ny amin'ny VHC / an'ilay aretina coinfected olon-dehibe marary izay efa vita izay azon'ny na fitsaboana amin'ny VHC mivantana antivirals-manao, ary izay tsy nandray an'ilay aretina antiviral fitsaboana. Nandrafitra ny hepatita B in marary notsaboina tamin'ny mivantana-miasa antiviral fanafody mety hiteraka olana lehibe aty na ny fahafatesana ao amin'ny marary sasany. Care matihanina ara-pahasalamana dia tokony ahantòny marary rehetra ho porofo ny amin'izao fotoana izao, na mialoha ny hepatita B alohan'ny manomboka fitsaboana aretina amin'ny Vosevi.
Ny fampiharana izany FDA nanome laharam-pahamehana Review sy ny fandrosoana Therapy fanondroana.
Ny FDA, ny sampan-draharaha ao anatin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Fanasoavam, miaro ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny nanome toky ny fiarovana, fahombiazana, sy ny fiarovana ny olona sy ny zava-mahadomelina fitsaboina momba ny biby, vaksiny sy ny vokatra biolojika fampiasana ho an'ny olombelona, ​​ary fitaovana ara-pitsaboana. Ny fahafahana misafidy ihany koa dia tompon'andraikitra amin'ny ny toerana azo antoka ny ny firenentsika ny sakafo, fanatsarana tarehy, ny sakafo fanampin-tsakafo, vokatra izay manome taratra eny elektronika sy ny mifehy ny sigara sy paraky.
Post fotoana: Nov-24-2017
Ny US Sakafo sy ny Fanafody Administration ankehitriny neken'ny Vosevi mba hitondra ny olon-dehibe amin'ny mitaiza ny hepatita C virosy (VHC) genotypes tsy misy simba anefa 1-6 (aretina aty), na amin'ny pahalemem simba anefa. Vosevi dia raikitra-levitra, combinat ...
API Sina 2017 tao Shanghai
API Shina, mitranga avy amin'ny 16-18 Mey 2017 tao Shanghai, Shina
API Shina, mitranga avy 16-18 Novambra 2016 in Wuhan, Sina
CPhI 2017 amin'ny SNIEC Shina, Shanghai
CPhI Shina, mitranga avy amin'ny 20-22 Jona 2017 amin'ny SNIEC, Shanghai, Shina